musha South AMERICA FOOTBALL STORies Vatambi veBrazil Vanotamba UGabriel Martinelli Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius inonyatsozivikanwa nezita rezita rokuti "Nelli". Yedu Gabriel Martinelli Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu nekumuka kwaGabriel Martinelli. Kiredhiti zvombo, BhoraLondon uye Zuva
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevechidiki vari kukurumidza kukurumidza kusvika muBrazil munguva pfupi yapfuura. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveGabriel Martinelli's biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
UGabriel Martinelli Nyaya yeChidiki Nechekuita Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kuenda, mazita ake akazara ndiGabriel Teodoro Martinelli Silva. Gabriel Martinelli sekudanwa kwaanowanzoitwa akaberekwa pazuva re18th raJune 2001 kuna amai vake, (zita remhuri: Silva) uye baba, Joao Martinelli muGuarulhos, São Paulo, Brazil. Tsvaga pazasi ndiyo mufananidzo wevabereki vaGabriel Martinelli vanogona kunge vari pakati-50's panguva yekunyora.
Sangana naGabriel Martinelli Vabereki-- Mr na Mr. Joao Martinelli. Chikwereti kuna IG
Gabriel Martinelli ane mhuri yake kubva kuGuarulhos. Iri iguta reBrazil uye guta rechipiri rine vanhu vakawanda munyika yeBrazil yeSao Paulo. Waizviziva here? Iye zvakare ane mhuri yake yemhuri kubva kuItari kuburikidza nababa vake Joao Martinelli.
Nyeredzi zhinji dzenhabvu muBrazil hadzina kumborarama hupenyu hwekupfuma isati yasvika stardom uye Gabriel Martinelli anga asina kusiyana sezvo iye achibva kumhuri yakaputsika kana isina kusimba yemhuri. Sezvakaita vamwe vatambi venhabvu (izvo zvinofarira Roberto Fermino uye Gabriel Jesu), akaunzwa kunetseka mumigwagwa kunyange asati ataura zita rake nenzira kwayo. Mhuri yaGabriel Martinelli yakagara mairi imwe yenzvimbo dzinotambura kwazvo dzeGuarulhos, chikamu cheguta chinongorumbidzwa nekugadzira vana vane matarenda mu nhabvu. Gabriel Martinelli akatanga kutamba nhabvu paaive mudiki.
UGabriel Martinelli Nyaya yeChidiki Nechekuita Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Semwana, Gabriel Martinelli aisada kufarira muzvidzidzo zvake uye aingonakidzwa nekutamba nhabvu. Vane kutya kuti kukwikwidza kwemutambo wenhabvu kwaive kwakakura nevashoma vaiisa pamusoro, vabereki vaGabriel Martinelli vaifanira kutsvaga sarudzo yekuti mwana wavo awane dzidzo yepamutemo kuburikidza nekudzidzisa mudzimba.
Gabriel Gabrielelli dzidzo yakatanga naFutsal. Kunge Philippe Coutinho pamberi pake, kudzora kwepedyo kwaMartinelli netsoka dzinokurumidza akazvarwa kubva pakutamba futsal. Kare ikako, iyo minda yemo Guarulhos yakashanda sehari yekunyungudutsa yevadiki vanoungana manheru ega ega kuti vatambe nhabvu.
Minda yemuno yeGuarulhos- Iko Nhabvu yakatanga kwaGabriel Martinelli. Image Chikwereti: Zuva
Gabriel Martinelli pakutanga aive nemaropafadzo evabereki vake avo Nekufamba kwenguva, zvakajeka kusahadzika kwavo, aiziva kuti aive netarenda uye aigona kuita chimwe chinhu kubva munhabvu. Semudzidzisi wechidiki, Martinellie akadzidza kutengeserana kweFutsal sekuoma, kusimba pamberi.
UGabriel Martinelli Nyaya yeChidiki Nechekuita Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Kubva pazera ramakore mapfumbamwe, uyu mudiki wepamberi akashevedzwa naiye VaKorinde 'futsal timu uyo akamukoka kumiedzo. Martinelli akahwina mwoyo wemurairidzi wake panguva yekuyedzwa, iro raimuona achiiswa muchikwata. Martinelli akachimbidzika kuita fungidziro nechikwata cheKorinto's Futsal. Waizviziva here? Akarova zvibodzwa zve66 muSpecial Division yeMetropolitan Championship uye zvimwe zvinangwa zve56 muHurumende yeGoridhe Series - achigadzira zvinangwa zvake panguva ino. 122 yakazara.
Gabriel Martinelli Hupenyu hwepakutanga neFutsal. Kusiya mutambo ne 142 Zvinangwa. Chikwereti: TowerHamlets
Kubva ku2012, kutamba nhabvu muminda uye kwete Futsal kwakava iko kwekutanga. Asati asiya Futsal yenhabvu paminda, Martinelli akahwina imwe nguva ye20 ichigadzira iyo tally- 142 zvibodzwa. Nenhabvu padanda, Martinelli akarova 63 zvinangwa. Panguva yekusvika 202 zvinangwa zve VAKORINDE akabvunzwa uye akadanwa ipapo ipapo Bhurosi yechina yekuparadzanisa timu Ituano FC mugore re2015.
Achiri kuItuano FC, Gabriel Martinelli akaramba achifadza murairidzi wake uye vateveri. Waizviziva here?. Nekuti aive akanaka iyeye, mudiki mudikidiki akafananidzirwa pazasi, akaputsa rekodhi yekuve mutambi wechidiki kutamba pasi pehunyanzvi kuna Ituano, chiitiko chakaita kuti vateveri vazive kuti aive nyeredzi mukugadzira.
Hupenyu hwepakutanga Hupenyu hwaGabriel Martinelli. Mufananidzo Chikwereti: SoccerLondon
UGabriel Martinelli Nyaya yeChidiki Nechekuita Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Kubvira pakatanga kuitika, Martinelli akaramba achiratidza vimbiso yakawanda pazera diki, iro raikwezva hofori dzeEurope dzemutambo (Man Utd, Barcelona, ​​Real Madrid). Waizviziva here? Pakati pevose hofori dzeEuropean, yaive Manchester United yakamuedza pakutanga, ichimukoka kumiedzo. Paaive pamiyedzo, Gabriel Martinelli akatamba muchikamu chechidiki chechidiki Mason Greenwood. Zvine kusuwa, Manchester United yakamuramba kunyangwe aine miedzo ina yekuvashungurudza. Usati wabva kuManchester kunowana mafuro manyoro kune imwe nzvimbo, Paul Pogba akasangana neBrazil yakarambwa. Mune mazwi a Martinelli;
"Nekuda kwechitarisiko changu, Pogba akaziva kuti ndakanga ndiri wekuBrazil. Akabvunza kana zvese zvaive nane neni uye kwandaitamba. Ndakamuudza zvese zvakaitika uyezve, akanditendera kuti nditore pikicha naye. Akanditarisirawo panguva yangu ikoko ”
Gabriel Martinelli akatarisirwa naPaul Pogba pamazuva ake ekuedzwa neUnited. Chikwereti: Zuva
Mushure mekutadza kwakundikana neManchester United, Barcelona yakangosarudza kurega Gabriel Martinelli kurovedza kune yavo inozivikanwa La Masia academy mune imwe kuti vamutarise vasati vaita sarudzo yekumusayina.
“Kudzidziswa kwandakaita naLa Masia ndechimwe chezvakanakisa zvandakawana mubhora. Kunze kwekuve chimwe chezvikoro zvikuru zvepasirese, mwero wekudzidzisa wakakwira zvakanyanya uye wakandiita kuti ndikure zvakanyanya munhabvu.”Martinelli akamboti.
UGabriel Martinelli Nyaya yeChidiki Nechekuita Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Kuti agadzire zita rakakura uye rinoremekedzeka pachake, Gabriel Martinelli akasarudza kudzokera kuBrazil, achienderera mberi nekirabhu yake Ituano FC. Mukana uyo waida kuzviitira zita wakazouya paakasarudzwa kuti atore chikamu mumutambo wakakurumbira weSão Paulo State Championship.
Waizviziva here? Gabriel Martinelli akatanga kubudirira sezvo aive nehunyanzvi hwekuita pakushanya. Akabatsira kutungamira Ituano FC mukukunda matanho eboka uye kusvika kuma-fainari fainhi yose nekuda kwezvinangwa zvake zvinoshamisa.
Gabriel Martinelli Rise kuFame- Hepano, anopembera chinangwa mune Sao Paulo Tourmet. Kiredhiti kuna SoccerLondon
Kuita kwaGabriel Martinelli kwakamuita kuti ave neruchiva rwekambo kambo kambo kekuBrazil kambo pre-Copa América kambi yekudzidzira muna May 2019. Zvinorevei izvi?. Zvinoreva kuti akasarudzwa kuti adzidzise pamwe chete nezvakada zve Neymar, Coutinho nevamwe vese vakuru veBrazil vatambi.
Zvakare, kutora chikamu muCampeonato Paulista AKA Paulistão (mutambo wetsiva wepamusoro-soro muBrazil mudunhu reSão Paulo) yakave imwezve nzvimbo yekutendeuka muvechidiki rake basa. Waizviziva here? Mushure mekudya makwikwi, Gabriel Martinelli akabata 3 inoshamisa inokudzwa Paulistão mukombe wenyaya uyo: (Campeonato Paulista Wakanakisisa Nyowani, Nyika Yemutambi weGore uye Chikwata cheGore kana 2019).
Gabriel Martinelli Mugwagwa Wakaenda Mukurumbira Nhau- Iyo Paulista 2019 Games Award. Chikwereti ku Twitter
Kunyangwe aive mudiki kudaro, Martinelli akazviitira zita kurudzi rwekumusha kwake. Achangopera mibairo, akazova nyaya yekufarira kubva kune mashoma kupfuura 25 makirabhu epamusoro pasi rose akatanga kukumbira kusaina kwake. Pakati pezvikwata zvese, yaive Arsenal yakatanga kusangana nezvido zvake. Achiri kuenda kuArsenal, iye mudiki weprodigy akawana mukana wekusangana nemamwe magamba ake.
"Ndakagashirwa nenzira yakanakisa. Sezvo ndiri mudiki kwazvo, ndakanyara zvishoma. Ndakaona vatambi vandaingova mukana chete kuona paterevhizheni uye PlayStation. Ivo vese vakandigamuchira zvakanaka chose uye vakaita kuti ndinzwe ndiri kumba”Akawedzera mushure mekujoinha Arsenal.
Gabriel Martinelli akatora matanho ake ekutanga kuti azadzikise zvaangagona kuburikidza nekuumburudza zvakapetwa kaviri vachipokana neNottingham Sango. Mushure mekurwira magamba eCarabao Cup, akahwina kaviri mumutambo we4-0 weStrade Liege muEuropa League. Ona pazasi chikamu chidimbu chevhidhiyo chiratidzo (Chikwereti kuAFCVN Official).
Muchokwadi, mune chinangwa chekuvhara mukati make kunyangwe ari makore nyoro. Pasina kupokana, vateveri veArsenal vanogona kunge vari padanho rekuona mwana mudiki achipinda mukoridhe repasi rose pamberi pemeso chaipo. Zvimwe zvese, tingati, zvino yave nhoroondo.
UGabriel Martinelli Nyaya yeChidiki Nechekuita Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Nekusimuka kwake mukurumbira nekuuya muLondon, zvine chokwadi chekuti vazhinji veArsenal neBrazil vateveri vanofanirwa kuve vakashamisika kana Gabriel Martinelli aine musikana. Chokwadi ndechekuti; atotorwa. uye kumashure kweiye akabudirira nhabvu, pane musikana akanaka anoenda nezita Rachel Akemy.
Sangana nemusikana waGabriel Martinelli- Rachel Akemy. Chikwereti kuna IG
Chingori mwedzi mushure mekubatana neArsenal, Gabriel Martinelli akatora matanho eushingi paakazvipira kuroora (kuita) musikana wake. Iyi yaive nzira yakafanana yakatorwa nechidhori chake Philippe Coutinho uyo akavata uye akaroora musikana wake achiri mudiki kwazvo.
Vese Rachel Akemy naGabriel Martinelli havambombopotsa mukana kutora mifananidzo yavo pavanenge vachishanyira zvinoshamisa. Iyo London London Bridge iri one yevavo vaviri vacho vanofarira kuwana panguva yavo yekuzorora.
Gabriel Martinelli neMusikana musikana kuLondon's Tower Bridge. Chikwereti kuna IG
Kufunga nezvenzira vese vari kuenda nehukama hwavo, zvinoita sekunge muchato unogona kunge uri unotevera pane yekutanga nhanho.
UGabriel Martinelli Nyaya yeChidiki Nechekuita Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kusvika pakuziva Gabriel Martinelli Hupenyu hwega hwaizokubatsira iwe kuwana mufananidzo uri nani wemunhu wake.
Gabriel Martinelli Chako Hupenyu Hwechokwadi. Chikwereti ku Instagram
Kutanga kuenda, Gabriel Martinelli murwi. Iye munhu anogara hupenyu hwakatsunga uye hwakasarudzika kunyangwe akataridzika uye akatonhorera kutaridzika. Achitaura nezvechitarisiko, Martinelli anotaridzika kuva mukuru kwaari kupfuura zvese nekuda kwekushinga kwake uye kugona kuenderana neizvo hupenyu zvinounzwa kwaari.
Martinelli uyo ari 18 panguva yekunyora anonyanya kudisisa nezvehupenyu hwake hwerudo. Haatombotyi kuita hukama nemusikana wake paruzhinji sevamwe vadiki vechidiki vechidiki vechidiki vaaizorega. Chokwadi ichi ndicho chimiro chekuzvivimba kwake uye hushingi.
UGabriel Martinelli Nyaya yeChidiki Nechekuita Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Martinelli uyo anozova muriritiri wemhuri yake kuburikidza nekutsunga kwake akaumba nzira yake yemhuri yake kurunyararo rwemari nekutenda bhora. Kuve nenhengo yemhuri yakabudirira uyo akazviita munhabvu kwakaita kuti wese wemba yake ave padyo uye abatanidzwe kumutambo wenhabvu.
Muvhidhiyo iri pazasi, mhuri yaGabriel Martinelli kusanganisira iye (hama) mukoma, munin'ina wababamunini pamwe nababamunini vese vanopemberera mukati meimba yavo diki mushure mekumuona achimutora mukuonekwa kwake kwekutanga Arsenal. Kiredhiti Zuva.
Pamusoro paBaba vaGabriel Martinelli: Joao Martinelli ari muBrazil ane midzi yeItaly anotenda kuna Martinelli Sekuru. Izvi zvinokodzera mwanakomana wake Gabriel Martinelli pakuwana pasipoti yeItaly uye zvakare kuchengetedza nzvimbo yekuve neramangwana neboka renyika reItaly. Sezvacherechedzwa pazasi, pane kufanana kunoshamisa pakati pababa nemwanakomana.
Sangana naBaba vaGabriel Martinelli. Chikwereti ku Instagram
Pamusoro paamai vaGabriel Martinelli: Zvishoma zvinozivikanwa nezvake. Nekudaro, zvinozivikanwa kuti wakabereka zita rekuti 'Silva' vasati varoora murume wake Joao. Tichifunga nezvevhidhiyo iri pamusoro, zvinoita sekunge amai vaGabriel Martinelli panguva yekunyora vachiri kugara muBrazil nevamwe vese vemhuri yaMartellielli.
Sangana naamai vaGabriel Martinelli. Chikwereti ku Instagram
UGabriel Martinelli Nyaya yeChidiki Nechekuita Untold Biography Chokwadi - LifeStyle
Asides anonzwisisa hupenyu hwake, kusvika pakuziva mararamiro aGabriel Martinelli padanho raizokubatsira kuwana mufananidzo wakazara wehunhu hwake.
Kutenda nekurerwa kwake, Gabriel Martinelli ane chikonzero chakasimba chekuchengeta mari yake muchionekerwa uye yakarongeka. Sezvino panguva yekunyora, hapana zviratidzo zveMartinelli kurarama hupenyu hwakajeka zvinoonekwa nyore nehurema hwemotokari dzinodhura uye dzimba huru.
Gabriel Martinelli Mararamiro echokwadi- Yakatsanangurwa. Chikwereti kuGlobeFreak uye Instagram
Kugona kwaMartinelli kupa mubatsiri wezvemari kune nhengo dzemhuri yake kwakafanana nekuzvipira kwaanoisa pachigamba.
UGabriel Martinelli Nyaya yeChidiki Nechekuita Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Chitendero: Gabriel Martinelli akarererwa kubva mumhuri yechitendero chechiKristu, achienda kuRoma Katurike Diocese yeGuarulhos panguva yehudiki hwake. Haavanzi kubva pakutenda Mwari panguva yemhemberero dzechinangwa chake.
Iyo 911 Attack yakaitika gore raakazvarwa: Waizviziva here? Chete 3% yevashandisi veInternet vakawana ruzivo nezve 9 / 11 kurwiswa kubva pawebhu. Chaizvoizvo munaSeptember 11 2001, vaviri vakapamba ndege dzeAmerica vakasimudza mumapatya eWorld Trade Center muNew York yakawa zvakateerana.
Kudengenyeka Kwenyika kwakaitika gore raakazvarwa: Zvakare munzira ye njodzi, kudengenyeka kwemusango kuyera 7.9 paRicher wadogo jolted Gujarat yeIndia muna Ndira 26, kuuraya vanhu vanosvika 20,000 uye kukuvadza vamwe 167,000.
Anokosha Technologies akasunungurwa gore raakazvarwa: PaJanuary 13, 2001, Wikipedia.org yakauya online. MunaJulayi 2001, Google yakatanga "Image Search" yakakurumbira iyo yakapa vashandisi mukana wekupfuura mifananidzo ye250 miriyoni. Pakupedzisira, munaNovember 15, Microsoft yakaburitsa Xbox vhidhiyo mutambo koni.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu yeGabriel Martinelli Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 4, 2020